सिके राउतको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा के भइरहेको छ ? – जलजला अनलाइन
सिके राउतको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा के भइरहेको छ ?
Posted on March 17, 2019 Author Comments Off on सिके राउतको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा के भइरहेको छ ?
चैत ३, काठमाडौं । सरकारसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेपछि जनकपुर झरेर ‘गुप्तबास’ बसिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतले आइतबारदेखि सिराहाको लाहानमा दुईदिने राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकेका छन् ।
सर्लाहीमा मतदान हुँदै गर्दा गोली चल्यो, झडपमा एक महिला गम्भीर घाइते
Posted on December 7, 2017 December 7, 2017 Author जलजला अनलाइन
मंसिर २१, सर्लाही । कौडेना गाउँपालिकाको फुलपरासी बुथमा नेपाली कांग्रेस र राजपा कार्यकर्ताहरुबीच झडप भएको छ । झडपमा एक महिलासहित तीन जना घाइते भएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार राउण्ड हवाई फायर गरेको छ । भोट खसाल्न लाइनमा बसेका बेला कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले राजपा कार्यकर्ताहरुले रोक्न खोजेपछि विवाद भएको थियो । कांग्रेस कार्यकर्ताले राजपा […]
मोदीको नेपाल भ्रमणबारे कमल ओलीको आयो यस्तो प्रतिक्रिया
Posted on May 9, 2018 May 9, 2018 Author
कोमल वली । आज विहान ब्यूँझने वित्तिकै मैले मोबाइलमा ट्विटर र फेसबुक चलाएँ । सामाजिक सन्जालका अधिकांश कमेन्टहरुमा मेरो ध्यान पुग्यो । अहिले सबैभन्दा बढी उठाइएको विषय रहेछ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण । र, मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे अधिकांशले विरोध गरेका छन् । अधिकांशले भनेका छन्– हिजो नाकाबन्दी गरेर हामीलाई दुःख दिएका मोदीलाई […]
मलेसिया रोजगारी: ‘उमेर हुन्जेल विदेशमा मस्ती गर्ने, मर्ने बेलामा ‘स्वास्नी’ चाहिने ?’ (भिडियो)
चैत २०, काठमाडौँ । क्वालालुम्पुरस्थित नेपाली दूतावासको श्रम शाखामा एक अधिकृत छिन्, सनमाया रम्तेल । यो खबर मदन ढुङ्गानाले रातोपाटीमा लेखेका छन् । सनमाया मलेसियामा कार्यरत रहेको करिब एक वर्ष भयो । मन्त्रालयले उनलाई श्रम सहचारीका रूपमा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा पठाएको छ र उनी दैनिकरुपमा नेपाली कामदारका समस्यासँग जुधिरहेकी हुन्छिन् । श्रम सहचारीका रूपमा रहेकी […]
निर्मला हत्या प्रकरण: दिलीपलाई छुटाउन एसपीलाई पत्रकार भण्डारीको यस्तो मेसेज, अब के होला ?
विप्लवसहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न ७७ जिल्लामा यस्तो छ सरकारको तयारी